Bartilmaameedkii Manchester United ee Mario Mandzukic oo heshiiska shaqsiga ah la gaaray koox cusub – Gool FM
(Turin) 17 Okt 2019. Xiddigii bartilmaameedka u ahaa Manchester United ee Mario Mandzukic ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiiska shaqsiga ah la gaaray Naadiga AC Milan.
Sida uu warinayo Warsidaha Il Giornale weeraryahanka kooxda Juventus ee Mario Mandzukic ayaa heshiis horudhac ah la gaaray naadiga AC Milan ee dalka Talyaaniga.
Mandzukic ayaa u muuqday mid u dhaqaaqaya Manchester United kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu aado Qatar, laakiin Wargeyska fadhigiisu yahay Milan ayaa warinaya in Rossoneri ay xaqiijin karto saxiixiisa.
33-sano jirkaan ayaa sidoo kale soo jiitay xiisaha kooxda Inter Milan, laakiin Old Lady ayaa taa bedelkeeda ahmiyadda siisay kooxda ay Magaalada Milan ku xafiiltamaan Nerazzurri.
Milan ayaa markaas kaddib awoodi doonta inay heshiis rasmi ah la gaarto Mandzukic ka hor inta uusan suuqu xirmin bisha Janaayo ama xagaaga.
Weeraryahankii hore ee Croatia ayaa ku biiraya kooxda maaliyadda midabkeedu yahay casaanka iyo madowga ee ku dheesha garoonka San Siro sidii ay horay u sameeyeen oo kale ragga ay isku waddanka ka soo jeedaan ee Zvonimir Boban iyo Ante Rebic.